अायल निगमको नाफा १५ करोड ६७ लाख - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
अायल निगमको नाफा १५ करोड ६७ लाख
फागुन २२, २०७४ 1044 ऊर्जा खबर/काठमाडौँ
नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले पेट्रोलको मूल्य समायोजनापछि दुई सातामा १५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाउने भएको छ । फागुन १७ गते कायम भएको नयाँ मूल्य अनुसार निगमको कारोबार नाफामा जाने देखिएको हो ।
पछिल्लो पटक समायोजित मूल्यअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३.७७ रुपैयाँ, डिजेलमा ०.०६ रुपैयाँ र मट्टीतेलमा १५.५८ रुपैयाँ नाफा रहेको निगम प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए । उनका अनुसार आन्तरिक हवाई इन्धनमा १५.३६ रुपैयाँ र अन्तराष्ट्रिय हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ३४.७२ रुपैयाँ नाफा हुनेछ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भने प्रतिसिलिन्डर ११९.६४ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ ।
आगामी चैत १ गतेसम्म पेट्रोल बिक्रीबाट ६ करोड ८९ लाख, डिजेलबाट ४४ लाख, मट्टीतेलबाट १ करोड २९ लाख, आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय हवाई इन्धनबाट २१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गोइतले बताए । खाना पकाउने एलपी ग्यास बिक्रीबाट भने निगमलाई १४ करोड ९० लाख रुपैयाँ घाटा हुनेछ ।
पछिल्लो पटक समायोजन भएको नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ३ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल, ८३ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धन ९५ रुपैयाँ तथा अन्तराष्ट्रिय हवाई इन्धन प्रतिलिटर १ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । ग्यासको मूल्य १३ सय ७५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
निगमले रक्सौल/बरौनी नाकाबाट पेट्रोल प्रतिलिटर ५३.१९ रुपैयाँ, डिजेल ५५.९४ रुपैयाँ, मट्टीतेल ५८.३५ रुपैयाँ, आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय हवाई इन्धन प्रतिलिटर ५७.०६ रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको छ ।
निगमको खरिद मूल्यमा भन्सार तथा प्रदुषण शुल्क, सडक मर्मत, पूर्वाधार र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिने गरेको छ । यस्तै, मूल्य स्थिरिकरण कोष, ढुवानी भाडा, बीमा खर्च, प्रशासनिक एवं बजार खर्च, प्राविधिक नोक्सानीसहितको शुल्क जोडिँदा पेट्रोलियम पदार्थ महंगो हुने गरेको छ । तर, भारतको खुद्रा मूल्यको तुलनामा निगमले निर्धारण गरेको मूल्य सस्तो पर्न आउँछ ।
रक्सौल सीमा नाकामा भन्दा नेपाली बजारमा पेट्रोल प्रतिलिटर २१.६६ रुपैयाँ, डिजेल २५.६१ रुपैयाँ र आन्तरिक हवाई इन्धनमा १०.३८ रुपैयाँ सस्तो छ । निगमले प्रत्येक २ सातामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ ।